Somaliland OO qarka U saraan Iney noqoto Dawladii Sideedaad EE Imraadka Carabta – Djiboutination
HomeNews Somaliland OO qarka U saraan Iney noqoto Dawladii Sideedaad EE Imraadka Carabta Somaliland OO qarka U saraan Iney noqoto Dawladii Sideedaad EE Imraadka Carabta
- April 26, 2017 - in News 310 0 script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Feysal Cali Waraabe ayaa ka dhawaajiyey in Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaliya oo xarun u ah Dowladda soomaliya ay ka door bidayaan inay ku biiraan Dowladda imaaraadka Carabta.
Wuxuu tilmaamay intii ay Soomaaliya ka mid noqon lahaayeen inay u dhaanto ku biirista Imaaraadka Carabtay, wuxuuna hadalkaan noqday mid ay dadka oo dhan ku tilmaameen hadal aan fadhin.
Wuxuu yiri Feysal “Waa todobo Imaaraadku Carabta ee midkii 8-aad ma noqonaa ayaan isleenahay, Dowladda Muqdisho ka Talisa waxaan ka dooran laheyn Dowladda imaaraadka Carabta oo xiriir wanaagsan uu naga dhaxeeyo”.
Wuxuu ka dhawaajiyey inuu hadalkaan u dirayo cid kasta oo rajo ka qabto inay Somaliland dib ula midowdo Soomaaliya, wuxuuna digniin u diray dadka howshaas wado.
Feysal ayaa si Kululu Dhaleeceyay Dowlada Soomaliya ee uu Hoggaanka ka yahay Madaxweyne Farmaajo isagoona shegay in soomaaliya inta ay sidan ku jirto aysan ka soo kabsan doonin dhibaatoyinkii ay soo martay, loona baahan yahay in la helo madax kale oo dalka wax u qabato.
Hadalka kasoo yeeray Feysal ayaa muujinayo halka uu gaarsiin yahay go’aanka Somailand ee ah inaysan dib ula midoobi doonin Soomaaliya.
Waxaanad Mooda Hadalkan inuu Dhiiri galinayo Inay Somaliland ka mid noqoto midowdaga daladah isku Tagey ee imaraadka Carabta.
Previous article Saudi Arabia, Djibouti sign MoUs, agreement Next article Ciidamada Ethiopia iyo Maleeshiyaadka Al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaanka Bartoor oo u dhexeeya Magaalada Baladweyne iyo deegaanka Halgan Halkaas Oo cidamadda Xabashida Looga Diley laba iyi labatan Askari About the author djibouti